Sida loo tirtiro Dhammaan Faallooyinka WordPress | Martech Zone
Sida loo tirtiro Dhamaan Faallooyinka WordPress
Arbacada, December 19, 2018 Arbacada, December 19, 2018 Douglas Karr
Maaddaama wada hadalada ku saabsan maqaallada ay u wareegeen aaladaha warbaahinta bulshada, nidaamyada faallooyinka ee nidaamka maareynta waxyaabaha sida WordPress ayaa lagu wareejiyay bakhaarrada spam. Runtii waa wax laga xumaado, waxaan jeclaan jiray la macaamilidda akhristayaashayda boggeyga oo aan uga jawaabo.
Sanado badan, madow backlinking noqday mid baahsan sida lataliyayaasha SEO isku dayeen inay ciyaarta matoorada raadinta. Dabcan, Google ayaa qabsaday oo xoojiyay algorithms-yada xoogaa yar. Waxay qabteen shaqo aad u layaableh oo backlinks xun aysan kaliya caawinaynin bartaada, waxay kugu aasi doonaan natiijooyinka raadinta.
Taasi ma joojinayso rinjiga madow, in kastoo. Mid ka mid ah istiraatiijiyad runtii xanaaq badan leh oo ay dejiyeen sanadihii la soo dhaafay ayaa ah faallooyinka faallooyinka. Nidaamka maaraynta maareynta sida WordPress, faallooyinka ayaa kufuran asal ahaan. Dadkani waxay dhisaan matoorro gurguurta, helitaanka foomka faallooyinka, kuna dhaji faallooyinka xiriiriyeyaasha ku soo noqoshada boggooda iyagoo isku dayaya inay ciyaaraan matoorada raadinta.
Waa wax laga xumaado sida milkiilaha goobta. WordPress wuxuu leeyahay aalad aad u fiican, Akismet, Taasi waxay kaa caawineysaa adoo adeegsanaya shabakad ka mid ah spamers la soo sheegay oo aad ku dabbaqeyso warbixinnadaas faallooyinkaaga. Si kastaba ha noqotee, haddii aadan haysan oo ay dejiso bartaada bartaas, waxaad isku arki doontaa kumanaan faallooyin spam ah spam mararka qaarkood habeenkii. Sidii aan u hubinayey qaar ka mid ah bogaggii hore ee caawa oo aan u cusboonaysiinayey, waan helay taas. Midkood wuxuu lahaa in ka badan 9,000 faallooyin spam ah!
Iskudayida inaad tirtirto kumanaan faallooyin spam ah bog mar guddiga Maamulka WordPress waa wax laga xumaado, sidaa darteed - mahadsanid - qof ayaa dhisay a WordPress plugin taasi waxay sameysaa khiyaanada.
Sida loo tirtiro Dhamaan Faallooyinka ama Dhammaan Faallooyinka taagan
Raadi oo rakib Tirtir Dhammaan Faallooyinka si fudud plugin. Markaad dhaqaajiso qalabka korontada ku shaqeeya, ikhtiyaar menu ah ayaa lagu dari doonaa aaladda Qalabkaaga.
Qalabyada> Tirtir Dhammaan Faallooyinka si fudud
Had iyo jeer waxaan kugula talinayaa inaad dib u kaydiso xogtaada WordPress kahor intaadan fulinin aalad sidan oo kale ah ... ma jirto waddo aad dib ugu heli karto faallooyinkan haddii aad si kama 'ah u tirtirto dhammaantood!
Waa kuwan xulashooyinka loogu talagalay fiilada:
Tirtir dhammaan Faallooyinka taagan - hab fiican oo lagu ilaaliyo faallooyinkaaga saxda ah markaad tirtirto inta hartay.
Tirtir dhammaan Faallooyinka - tani waxay tirtiraysaa faallooyin kasta oo nidaamkaaga ah.
Waxaan kugula talin lahaa inaad u adeegsato qalabkan kumbuyuutarka isku day inaad si toos ah ugu jahawareerto keydkaaga! Iyo, sida ugu dhakhsaha badan ee aad dhameyso, waxaan kugula talin lahaa inaad naafada ka dhigto qalabka si macaamiishaada ama maamulayaasha kale aysan si kama 'ah u u adeegsan.
Tags: spam gadaalspamhat spammasax dhammaan faallooyinkatirtir dhammaan faallooyinka si fududfaallooyinka la sugayofaallooyinka ereyga
Seddex barnaamij oo aad ubaahantahay inaad si hufan ugu socodsiiso ganacsigaaga ganacsiga
Ayaa Dhisi Doona Websaydhkaaga Xiga?